Madaxweynaha dowlada Puntland oo ummada Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay sanadguurada 56-aad ee maalinta xornimada - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha dowlada Puntland oo ummada Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay sanadguurada 56-aad ee maalinta xornimada
July 1, 2016 Abdi Omar Bile Puntland, Somalia 0
Madaxweynaha Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali oo saxaafada kula hadlayay Gaalkacyo.
Gaalkacyo-(Puntand Mirror) Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa ummada Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay sanadguurada 56-aad ee madaxbanaanida dalka.
Madaxweynaha oo hadda ku sugan magaalada Gaalkacyo ayaa tilmaamay maanta in ay tahay maalin ku weyn shacab weynaha Soomaaliyeed, maadaaba ay tahay maalintii dadka Soomaaliyeed ay heleen xorriyada iyo gobanimada.
“Waxaan rabaa maanta in aan halkaan uga dirodadweynaha Soomaaliyeed meel walboo ay joogaan gaar ahaan dadweynaha reer Puntland hambalyada sannad guurada 56-aad ee ka soo wareegtey maalinta 1-da Luulyo oo ah maalintii gobollada koonfureed ee dalku ay qaateen xorriyaddooda ayna midoobeen woqooyiga iyo Koonfurta dalku” ayuu yiri Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali.
Ugu dambeyn Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali waxa uu Eebbe ugu baryey in uu ummadda Soomaaliyeed sannadkaan sannadkiisa ku gaadhsiiyo barwaaqo, horumar iyo dawladnimo taam ah.
Kowda Luulyo sanadkii 1960, ayaa gobolada Soomaaliyeed ee koonfurta waxay xoriyadooda ka qaateen gumeystihii Talyaaniga, waxaana midoobay koonfurta iyo waqooyiga oo Iyana xoriyadooda ka qaatay 26-dii Juun 1960 gumeystihii Ingiriiska.
Doorashada afti ka qaadida dad weynaha Boqortooyada Midowday (Britain) ayaa bilaabmatay saakay oo Khamiis ah halkii saac ee subaxnimo ee saacada Britain, waxaana dad weynaha ay u codaynayaan in Britain ay ka baxdo Midowga Yurub [...]